आजबाट जोर बिजोर प्रणाली: के के खुल्ने? हेर्नुहोस सूची – kalikadainik.com
आजबाट जोर बिजोर प्रणाली: के के खुल्ने? हेर्नुहोस सूची
बिहिबार, जेठ २९, २०७७ | ८:३१:३७ |
काठमाडौं । सकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ । उच्चस्तरीय समितिको सिफारिशअनुसार हिजो राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पसल र निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सवै प्रकारका पसल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । मन्त्रिपरिषद बैठकले निजी सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय आजदेखि नै लागू हुनेछ ।
तर, त्यसका लागि जोर विजोर प्रणाली लागु गरेको छ । जोड गते जोड र विजोर गते विजोड नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन चल्ने दिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारी साधन भने अहिले खोलिने छैन ।
सोही अनुसार सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी निर्णय गरेको हो । विज्ञहरुले पनि कोरोना महामारी लामो समय जाने देखिएको भन्दै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाउँदै आएका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ र सञ्चार एवं सुचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीवारको दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत लकडाउनेको सम्पुर्ण मोडालिटीबारेको निर्णय सार्वजनिक गर्नेछन् ।
रेष्टुरेन्ट पनि खुल्ने
सरकारले रेष्टुरेण्ट पनि खोल्न दिने भएको छ । तर, त्यहा बसेर खान भने पाइने छैन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेष्टुरेण्टलाई पनि सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना कम प्रभावित क्षेत्रमा भएका रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने निर्णय भएपनि उनीहरुले प्याकिङ तथा टेक अवे सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण कुनै पनि ग्राहकले त्यहाबाट सामान किनेर लैजान पाउने छन् । तर, त्यही बसेर खाएमा भने कारवाही गरिने भएको छ ।